Shiinaha 4mm Double core sanka silig Factory, Soo-saareyaasha Iyo CE - Technology Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > N95 silig sanka > 4mm silig laba geesle sanka ah
Wayaheenna siligga 4mm laba geesle ah ee sanka ma leh wax jaban iyo guntiinno. Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS. Ithas ROHS ilaalinta deegaanka, waxay gaaraan sun aan sun ahayn, iska caabin isku laablaab ah iyo dhaqsaha badan Waxaa loo dhoofiyay in kabadan toban wadan sida Canada iyo Jarmalka.
Hordhaca Wax soo saarka ee 4mm siligga sanka laba geesoodka ah
2. 4mm silig laba gees leh oo sanka ah ayaa lawareejin karaa360 darajo, maroojin macquul ah, saameyn qaabeyn wanaagsan.
2.ProductParameter (Faahfaahinta) siligga 4mm laba geesoodka ah
Feature Production iyo Codsiga ee 4mm silig core sanka
The4mm silig waji sanka laba geesoodka ah ee aan soo saarnay ma leh darfo jaban iyo guntin, waxaa si ballaaran loogu isticmaalay maaskaro N95 iyo maaskarada diy.
Faahfaahinta wax soo saarka ee siligga sanka laba geesoodka ah ee 4mm
Shahaadada Wax soo saarka ee4mm silig laba geesle sanka ah
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba4mm silig laba geesle sanka ah
We will provide you with 7 * 24 hours follow-up service and technical support when you buy 4mm silig laba geesle sanka ah of our company, so that you can have no worries after sales.
1. S: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?
2.Q: N95 maaskaro sanka aluminium ama sanka laba geesoodka ah?
4.Q: xaqiijin noocee ah ayuu sankaaga bar ku dhaafay?
5. S: sidee baybridge-ka sanka oo qodayaa u noqdaa mas'uuliyad?